हिटलरभन्दा पनि क्रुर पुटिन : डा. केसी – Health Post Nepal
हिटलरभन्दा पनि क्रुर पुटिन : डा. केसी
२०७८ फागुन १३ गते १२:२४
काठमाडौं – डा. गोविन्द केसीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई हिटलरभन्दा पनि क्रुर भएको आरोप लगाएका छन्। युक्रेनमाथि शैन्य आक्रमण गरेकोमा निन्दा गर्दै उनले पुटिन एक्काइसौं शताब्दीका हिटलर भएको बताएका हुन्।
उनले एक्काइसौं शताब्दीमा पनि यस्तो हुनसक्छ भनेर आफूले कल्पनासमेत नगरेको बताएका छन्। ‘रुसले युक्रेनमाथि गरेको युद्ध अपराधको पराकाष्ठा हिजो राति बिबिसीलगायत विभिन्न समाचार माध्यमबाट अवगत भयो। एक्काइसौं शताब्दीमा पनि यस्तो हुन सक्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। एक्काइसौं सताब्दीको हिटलर पुटिन। हिटलर भन्दा पनि क्रुर। संसारभरिका सबैले यसको घोर विरोध र भत्सर्ना गर्नु पर्दछ र रोक्ने प्रयास गर्नु पर्छ।’, उनले भनेका छन्।
डा. केसीले आफूसहित सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो घटनाले आहात भएको बताएका छन्। ‘म प्युठान जानेक्रममा अहिले गुल्मीको तम्घासमा छु। म यो घटनाले आहात भएको छु र सबै नेपालीहरु पनि आहात छन्। म रेसुङ्गा तपोभूमिमा गएँ र मन्दिरमा कसैले चढाएको पताकामा मन्दिरको अंगार ( साथमा साधारण कलम मात्र भएकोले) ले आफ्नो अभिव्यक्ति जाहेर गरे।’, उनले फोटो सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्।